बिर्तामोड नगरपालिकाको कक्षा चारको किताबमा त्रुटी नै त्रुटी
झापाको मुटु नगरपालिका बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा चार कक्षाको किताबका पाठ लेख्नका लागि पर्याप्त नेपाली भाषा र व्याकरण जान्ने शिक्षक (लेखक) हरूको खडेरी परेकै हो त ?
यो पंक्तिकारको एक छोरा विर्तामोडस्थित एक निजी विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्दैछन् । विर्तामोड नगरपालिकाले आचरण शिक्षासम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन गर्दैछ भन्ने सुन्दा खुशीले मन प्रफुल्ल भएको थियो । हाम्रा नानीहरू असल आचरणयुक्त हुने भए भनेर । तर, निःशुल्क रूपमा प्राप्त यस पुस्तकमा बग्रेल्ती त्रुटी नै त्रुटी भेटिएपछि पंक्तिकार स्तब्ध भयो ।
पुस्तकको पाठभित्रका त्रुटीहरू : पाठ १ मै ठूलो त्रुटी छ । शहरमा बसेका दाजुले गाउँमा रहेकी बहिनीलाई चिठी लेखेको पाठको पहिलो प्याराग्राफमा, ‘म यहाँ सञ्चै छु । त्यहाँ बुवा, आमा र तिमी पनि सञ्चै छौ भन्ने आशा गर्दछु । मेरी प्यारी बहिनी पढाइका लागि काठमाडौँमा भए पनि म सधैँ बुबा, आमा, तिमी र आफ्नो नो गाउँलाई सम्झिरहन्छु ।’ लेखिएको छ । प्याराग्राफ पढ्दा बहिनी पो शहरमा छिन् भन्ने बुझिन्छ । ‘मेरी प्यारी बहिनी म पढाईका लागि काठमाडौमा भए पनि..’ हुनुपर्ने थियो ।
फेरि यो एकै प्याराग्राफमा एक ठाउँमा बुवा लेखिएको छ भने अर्को ठाउँमा बुबा लेखिएको छ । यो असाध्यै असावधानी भयो नि होइन र ? अब हेर्दै जाऔँ पछिल्ला पाठहरूमा के कस्ता त्रुटी, गल्तीहरू छन् ?
पाठ २ को शीर्षकको एक शब्द ‘गरौं’लाई चन्द्रविन्दु दिएर ‘गरौँ’ लेखिनु पर्नेथियो । त्यस्तै फूर्वा को उकारलाई ठीक ठाउँमा लेखि ‘फूर्वा’ हुनुपर्ने थियो । पाठ ३ मा शीर्षक ‘अन् धविश्वास’ छ । बीचमा स्पेश किन ? पाठ ४ मा कतिपय शब्दमा चन्द्रविन्दु छुटेको छ । पुलिसले समाउँछ लेखिएको छ । समाउँछन् लेख्नुपर्ने थियो । पाठ ५ मा राष्ट्र बैंकको जुन भवनको चित्र छ त्यो भवन धेरै पहिलेदेखि काठमाडौको थापाथलीमा देखिन छाडेको हो । शीर्षकमा वित्तीय शब्द लेखिएको छ भने प्याराग्राफमा पेट काटेको ब अर्थात् बित्तीय छापिएको छ । पाठ ६ मा केही शब्दमा चन्द्रविन्दु दिइएको छैन । पाठ ७ मा विद्यार्थीको नाम मो. अन्सारी लेखिएको छ । नामको मो. लाई पूरै शब्द मोहम्मद लेखिँदा राम्रो हुनेथियो ।
पाठ ८ को शब्दार्थ खण्डमा आफ्नो हुनुपर्नेमा आफ्नो भएको छ । हलन्त ठीक ठाउँमा परेको छैन । पाठ ९ मा शब्दहरूमा हलन्त ठीक ठाउँमा परेका छैनन् । पाठ १० को दोस्रो प्याराग्राफको पहिलो लाइनको गरिएको शब्दको साटो गरेको हुनुपर्ने थियो । पाठ ११ मा ‘सरसामान छरेर फोहोर मैला हुन्न म’ छापिएको छ । हुन्नको ठाउँमा ‘गर्दिँन’ हुनुपर्ने थियो । पाठ १२ मा सिमी हुनुपर्नेमा सिँवी र कटहर हुनुपर्नेमा कटर छापिएको छ । पाठ १३ मा कतै ट्युबेल शब्द छापिएको छ त कतै ट्युववेल । पाठ १४ मा कतै व्यवस्थापन छापिएको छ कतै व्यबस्थापन ।
यसै पाठमा Burying हुनुपर्नेमा Bruying छापिएको छ । त्यस्तै Compost या Composting हुनुपर्नेमा Composing छापिएको छ । पृष्ठ ४२ मा एकैठाउँमा आवश्यक आवश्यक छापिएको छ । पाठ १६ एकै अनुच्छेदमा मानिसको नाम शिवु र शिबु छापिएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर तहका जनशक्ति भएको अर्थमा पाठ लेखिएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर हुँदैनन् भन्ने सामान्य कुरा पनि ख्याल गरिएको छैन । स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने थियो ।
पाठ १७ मा पुर्जा शब्दको साटो प्रेस्क्रिप्सन या Prescription नै लेखिनु ठीक हुन्थ्यो । पाठ १८ मा शारीरिक व्यायामलाई अंग्रेजीमा Physical Exercise भनिनु पर्नेमा Physical Training छापिएको छ । पाठ १९ मा धर्म, संस्कृति र स्थानीय लोक बाजा हाम्र्रा संस्कारहरू शीर्षक दिइएको छ तर पाठभरि मानिस जन्मेदेखि मृत्यसम्मको संस्कारबारे लेखिएको छ । अक्षराम्भ हुनुपर्नेमा अक्षरारम्भ भएको छ । खाल्डो हुनुपर्नेमा खाल्टो छापिएको छ ।
पाठ २० मा पच्चीस हुनुपर्नेमा पच्चिस छापिएको छ । डोटेली हुनुपर्नेमा डोटेल भएको छ । पाठ २१ मा संस्कृति हुनुपर्नेमा सकृति शब्द छापिएको छ । बालन हुनु पर्र्नेमा बालुन शब्द छापिएको छ । शब्द र अर्थ खण्डमा भेषभुषा हुनु पर्नेमा वेशभुषा शब्द छापिएको छ । अभ्यास खण्डमा पनि सोही गल्ति दोहोरिएको छ । एउटै शब्द दुई स्वरुपमा छापिएको छ जस्तै सङ्गीत र सङ्गीत । स्थानीय पाठ्यक्रमअनुसार प्रकाशित सो पुस्तकमा कमसेकम झापा जिल्ला भित्रका जातजातिका बाजाहरूबारे पनि पाठ दिइएको भए निकै सान्दर्भिक हुनेथियो ।
पाठ २२ दमकको पनि नाम छापिएको छ । दमक र आसपासमा हुने सडक दुर्घटनाबारे बिर्तामोडले उल्लेख गर्न मिल्ला तर दमकले चित्त दुखाउला । दमकसहित बढी दुर्घटना हुने थप ठाउँको नाम पनि दिइएको भए वेश हुन्थ्यो । पाठ २३ मा ट्राफिक संकेतको परिभाषा र आवश्यकताबारे पनि लेखिएको भए वेश हुनेथियो । पाठ २४ मा एक ठाउँमा मोवाईल र अर्को ठाउँमा मोबाईल लेखिएको छ । सञ्चार प्रविधिका माध्यममा टेलिभिजन उल्लेख गरिएको छैन । पाठ २५ मा ढुङ्गा हुनुपर्नेमा ढुङ्गी छापिएको छ । छौ हुनुपर्नेमा छौँ भएको छ । यसै पाठको अभ्यास खण्डमा ठीक वाक्यमा (✔️) र बेठीक वाक्यमा ( ) चिह्न लगाऊ छापिएको छ । बेठीक वाक्यमा (❌) हुनुपर्ने थियो । पाठ २६ मा पाठको शीर्षकमै त्रुटी छ । न्यूनीकरण हुनुपर्नेमा ‘न् यूनीकरण’ भएको छ । बिर्तामोड हुनुपर्नेमा विर्तामोड भएको छ । त्यस्तै दुई शब्दबीच स्पेश दिइएको छैन । बीच हुनुपर्नेमा बिच लेखिएको छ । कहीँ बन लेखिएको छ कहीँ वन लेखिएको छ ।
पाठ २७ मा विद्यालयमा किन राम्रो वातावरण हुनुपर्ने र राम्रो वातावरणले विद्यार्थीमा कस्तो राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने व्याख्या छैन । यस्ता कमजोरी अरु पाठमा पनि छन् । परिणाम बताइँदा विद्यार्थीमा सकारात्मक असर पर्छ । यसै पाठको दोस्रो प्याराग्राफमा मीना कक्षा ४ मा पढ्छिन् । उनी जिज्ञासु छन् लेखिएको छ । उनी जिज्ञासु छिन् हुनुपर्ने हो ।
मीना र सिमा, एउटा नाम किन दीर्घ र अर्को किन ह्रस्व ? सिमसार, झोलुङ्गे पुल भनेको के हो ? पाठमा परिभाषा नै नदिइ तिनको अर्थ सोधिएको छ ? जामुनखाडीको विज्ञापन भयो कि ? बरु कन्काईमाई समग्र धार्मिक क्षेत्रको बारेमा बताउँदै अन्य आयाम जोड्दै सिकाउँदा बढी सान्दर्भिक हुनेथियो । यसै पाठमा त्यहीँ हुनुपर्नेमा चन्द्रविन्दु बेगरको त्यही शब्द छापिएको छ ।
पृष्ठ ७४ मा भ्mयाल हुनुपर्नेमा झयाल शब्द छापिएको छ । पृष्ठ ७५ मा झारलाई निर्जीव वस्तु भनिएको छ । फुलबारी नभएर पूmलबारी हुुनुपर्ने हो । पृष्ठ ७६ मा तिमी आपूm पढ्ने कक्षा कोठालाई राम्रो वातावरणको गर्न के के गर्दछौ ? लेखिएको छ । वातावरणयुक्त बनाउन लेखिएको भए वेश हुन्थ्यो ।
यसै पृष्ठमा समग्री लेखिएको छ, सामग्री हुनु पर्ने हो । अरु त अरु, प्रकाशकको भनाइमा नै त्रुटी छन् । धरातीलय शब्द नयाँ हो कि के हो ?’ बिर्तामोड नगरपालिकाका उच्च जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई पुस्तक सिर्जनाको प्रेरणा भनिएको छ ।
गल्ति नै गल्तिले भरिएको किताब लेख्न कस्तो प्रेरणा दिएका हुन् ? र, दर्जनले किताब लेखन तथा सम्पादनको जिम्मेवारी लिएका जनाइएको छ । ‘धेरै बिरालाले मुसा मार्दैनन्’ नेपाली उखान यहाँ चरितार्थ भएको छ । तर, सँगै उल्लेख गरिएको छ, ‘पाठ्यक्रमका उद्देश्य साध्य र पाठ्यपुस्तक साधन हुने हुँदा साध्य प्राप्तिका लागि साधन परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था सधैँ रहिरहन्छ ।
यो पहिलो प्रयास भएको हुँदा यसमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरू रहेका हुन सक्छन् । प्रबुद्ध शिक्षक मित्रहरू, विद्वतवर्ग तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग सकारात्मक सुझावको अपेक्षा गरिन्छ । भेटिएका कमी कमजोरी हटाउने परिमार्जनको प्रक्रियालाई आगामी संस्करणहरूमा निरन्तरता दिने बचनबद्धतासहित यो पाठ्यपुस्तक बिर्तामोड नगरपालिकाको तर्पmबाट सम्पूर्ण विद्यार्थी वर्गमा समर्पण गरिन्छ ।’
केही सीमित कमिकमजोरीलाई मानवीय त्रुटी मान्न सकिन्छ तर किताबैभरि पाठै पिच्छे बग्रेल्ती त्रुटी त हुनु नपर्ने हो । यो पुस्तक विद्यार्थीका लागि लेखिएको हो । स्मारिका या प्रतिवेदन त होइन नि । पहिलो प्रकाशन, संस्करण भएकाले नीतिगत, संरचनागत, पाठ्यक्रम आदि कमजोरी हुन सक्छ तर वाक्य गठन, हिज्जे र पु्रफ जस्ता त्रुटी जताततै हुनु लाजमर्दो कुरा भएन र ? पछिल्ला संस्करणहरूमा सुधार्दै लान अवश्य सकिएला तर यही पहिलो संस्करणले विद्यार्थी, शिक्षकगण तथा अभिभावकहरूमा पर्ने भ्रमको असरको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिने कि नलिने ?
प्रकाशकको भनाईमा, ‘स्थानीय विषयका रूपमा आचरण सचेतना शिक्षाको पाठ्यपुस्तक तयार गरी शैक्षिक सत्र २०७६ देखि कक्षा ३ र ४ मा लागु गरी क्रमश ः कक्षा ८ सम्म पु¥याउने योजना बनाएअनुरुप यो पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको हो ।’ उल्लेख गरिएको छ । तसर्थः कक्षा ३ को पुस्तकमा पनि प्रशस्तै त्रुटीहरु होलान् ।
यस्ता त्रुटीपूर्ण पुस्तकले कस्तो ज्ञान देलान् ? माथिल्ला कक्षाका लागि प्रकाशन गरिने यस्तै प्रकृतिको पुस्तकमा पनि त्रुटीहरू हुनेहुन् कि ? प्रकाशक तथा सरोकारवाला अत्यन्त सचेत बन्न जरुरी देखिएको छ ।
त्रुटीले झापालीकै शीर निहुरिने देखिन्छ । नेपाली भाषा बिगारेको दोष लाग्छ सक्छ । बिर्तामोड झापाकै केन्द्र, मुटु हो । बिर्तामोड सदैव उत्कृष्ट र मानक हुनुपर्छ भन्ने आम अपेक्षालाई पनि आत्मसात गर्नु जरुरी छ । यो एक सामान्य अभिभावक (पाठक) को सामान्य प्रतिक्रिया मात्र हो । विषय विद्, विज्ञहरूलाई यो पुस्तक चिरफार या शल्यक्रिया गर्न दिइयो भने अझ धेरैधेरै त्रुटीहरू फेला पार्लान् र सुधार गर्न ठूलो सहयोग पुग्ला ।